Abakhiqizi & Abahlinzeki Bakwa-PP Spunbond Abangekwaluka | URayson
I-assortment eyanele yekhwalithi enhleIndwangu ephothiwe eboshiwe ye-PP inikezwa inkampani kaRayson ngosayizi nobukhulu obuhlukahlukene. Siqophe i-niche njengenye yabakhiqizi bezindwangu ze-PP ezi-spun-bond ezingabonakali kakhulu e-China. Sisebenzisa impahla esezingeni eliphakeme kakhulu nezindlela zakamuva zokukhiqiza indwangu ye-PP engeyona eyelukiweyo. Le ndwangu engavukiwe ye-PP iyinhlanganisela ephelele yokuqina okungabazeki, ukuthamba, namandla amahle.
I-PolyPropylene Spunbond Indwangu Engeyona ye-Pocket Spring
Indwangu ye-PP Spunbond Indwangu ye-Nowoven isho i-polypropylene spun-bond indwangu engenalo, amandla amahle kanye nokugcwala. Yinto efanelekile yephakethe entwasahlobo. Isisindo sendwangu sisuka ku-60gr kuya ku-80gr ngobubanzi obuhleliwe. Indwangu yeRaysonon Enloven ihlinzeka ngentengo engcono kakhulu ye-PP Spunbond Nonwoven Fabric Firc, wamukelekile ukuxhumana nathi.
Embossing indwangu elukiwe
Embossing indwangu elukiwe .Kukhona uhlobo ezimbili. Kungama-PC amabili angenamkhawulo acindezelwe ngokotini.
Best PP Spunbond Indwangu Evikekile Yendwangu Yefektri Matress Ifektri -
Best PP Spunbond indwangu elukiwe yendwangu yefektri ye-Matress Factric -.Singumkhiqizi wendwangu ye-PP Spunbond nonwoven enolwazi olungaphezu kweminyaka eyi-14. Iso, BV& I-SGS eqinisekisiwe. Futhi sihlinzeka ngendwangu ye-PP SPUMBED ONLOVEN ONLOVEN ngawe ngqo.Umkhiqizo wethu wamukela i-polypropylene njengento eluhlaza, ngokushisa okuphezulu okuncibilikayo, ukuhlunga, ukufuya usilika ku-amanetha, bese kuba indwangu, ekugcineni yavutha futhi i-slitting i-okouto ezenzakalelayo.Izinga lemikhiqizo yethu liqinisekisiwe futhi ukulethwa kusesikhathini. Imikhiqizo eyinhloko: Ifenisha engasebenzi / ekwenzeni isikhwama sendwangu esingeyona / yezolimo kanye nokuvikelwa kwengadi / ingadi ukusetshenziswa okungafanele / kwezokwelapha
Isendlalelo sekhwalithi ephezulu ye-polypropylene nokwelukiwe indwangu ye-geotextile
I-Polypropylene ayilukhuni geotellits ama-geootellilles angezinyonga angenazo izibopho ezenziwe nge-100% polypropylene izindwangu ezihlukile. Izindwangu ze-geypropylorylene ze-nomboven zisetshenziswa ezinhlobonhlobo zezicelo ezimakethe zomphakathi nangomgwaqo, njengokukhiwa komgwaqo, iphrojekthi yokwakha yezemidlalo, ukuhlukaniswa kwe-landfill kanye nokuvikelwa kogwini.
Khombisa Igumbi Lemikhiqizo Ye-Rayson Enloven Engenziwe
I-FOSHAN Rayson Non-Woven Co, Ltd. ungumkhiqizi onamava embonini yendwangu engalukiwe eneminyaka eminingi enesipiliyoni. Izibophezele ekucwaningeni kwendwangu, ukuthuthukiswa, kanye nokukhiqizwa futhi inezinkomo eziyi-10 ezithuthukile zokukhiqiza izindwangu, ezikwazi ukukhiqiza izindwangu ze-PP ezingezona izindwangu, i-SS, i-puntle punch kanye nendwangu ye-spunlace , Ngokukhiqiza isisindo kusuka ku-10gsm kuya ku-150gsm ngaphakathi kobubanzi be-4.2m, ngenani lokukhiqiza lonyaka elinesisindo esingaphezu kwamathani angama-36,000. Le nkampani iyakwazi ukukhiqiza izindwangu ezingeyona eyenziwe ngemibala eminingi ehlukene nosayizi, ezifanele ukusetshenziswa okuningi okuhlukile.
I-PP Spunbond i-geovextile elukiwe
I-geotextile elukiwe Isebenzisa izimboni zokwakha kanye nezokubuka komhlaba ngaso sonke isikhathi futhi yenza uphawu ngokuzinzisa, ngcono amasayithi okudonsa kanye nokuhlunga, ukuhlukanisa imithwalo ebekiwe. Le ndwangu engabonisiwe ye-geotexlexle yenziwe nge-polypropylene spunbond noven, imvamisa ngombala omnyama nompunga. Indwangu iyinto exakile, eco-friendly and UV yazinza.
Imikhiqizo eyinhloko yeRayson Non Woven Company
I-FOSHAN Rayson Non-Woven Co, Ltd. ungumkhiqizi onamava embonini yendwangu engalukiwe eneminyaka eminingi enesipiliyoni. Izibophezele ekucwaningeni kwendwangu, ukuthuthukiswa, kanye nokukhiqizwa futhi inezinkomo eziyi-10 ezithuthukile zokukhiqiza izindwangu, ezikwazi ukukhiqiza izindwangu ze-PP ezingezona izindwangu, i-SS, i-puntle punch kanye nendwangu ye-spunlace , Ngokukhiqiza isisindo kusuka ku-10gsm kuya ku-150gsm ngaphakathi kobubanzi be-4.2m, ngenani lokukhiqiza lonyaka elinesisindo esingaphezu kwamathani angama-36,000.
Indwangu evikelekile yangaphambi kwefenisha
IRaysonon yifektri yobungcweti obekulokhu yenza indwangu ye-PP engekiwe ngaphezu kwama-14years.Indwangu evikelekile yangaphambi kokusika Ungomunye womkhiqizo wethu osetshenziselwa ifenisha, njengomatilasi kanye nosofa. Umugqa wangaphambi kokusika wenza izinyembezi kalula. Kungathuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqizwa kwefulo. Indwangu evikelekile yangaphambi kokusika ifenisha ithunyelwa emakethe yase-US naseYurophu.
Ukuthunga indwangu elukiwe
Ukuthunga indwangu elukiweIndwangu ye-beige yombala ongeyona isetshenziselwa isembozo se-matress esenza umatilasi kufanelekile.Ubukhulu bungu-2.1m kuya ku-2.4m.Njalo 60Gram kuya ku-100gramUmbala we-beige, grey, omnyama nomhlophe.
Stitch Bonded PP Spunbond indwangu elukiwe yomatilasi
Izindwangu ezi-Stitch-Bond ezingalukiwe, uhlobo olulodwa lwe-PP spun ibhondi elukiwe, zenziwa emshinini wokuluka obopha iwebhu, noma ubambe i-web esendaweni, ne-hangitudinal yarns. Izinto zokwenziwa zendwangu ze-PP Indwangu ye-stitch Bonded PP ayikho izinto ezilukiwe zokufaka umatilasi. Isetshenziswa njengendwangu ezansi umatilasi. Indwangu engalukiwe i-70gr kuya ku-100gr ngemibala ehlukahlukene. IRaysonn iyona engcono kakhulu ye-PP Spun-Bond-Bonder An-febric Manzi. Uyemukelwa ukubuza.
Indwangu ehlanganisiwe ehlukile ye-Box Spring Cover
Sisindise inkinga lapho sikhiqiza ePocket entwasahlobo kuba nomsindo omkhulu. Kuhlanganiswe ngendwangu ye-dot nodowenven kungagcina yonke inkinga yomsindo lapho kukhiqizwa umatilasi, usofa nezinye ifenisha. Ithambile futhi iphefumula. Futhi i-stenght ne-elogation kugcina izinga elifanele.
Indwangu engamelana namanzi engavunyelwanga
Indwangu engamelana namanzi evumayo.Isebenzisa ishidi lokulala kwezokwelapha kanye nezinto ezilahlwayo, isibonelo imaski yokuhlinza, ingubo etholakalayo yokusebenzisa.Sinesayizi amaningi ngokukhetha kwamakhasimende .Nombala kanye negramu.Ihlala ipakisha esikhwameni noma i-carton.